A Europe Nsoro Planner enyere ị ịnyagharịa | Save A Train
Home > Travel Europe > A Europe Nsoro Planner enyere ị ịnyagharịa
A Europe Nsoro Planner dị oké mkpa na-ahazi gị ụgbọ okporo ígwè na njem gafee Europe. Na mbụ, e nwere ihe karịrị 10,000 ebe otu onye nwere ike ileta na Europe. N'ihi na ọnụ ọgụgụ nke ebe, ọ dị mkpa iji chọpụta otú ese njem gị. Eleghị anya ị chọrọ nwere gị onwe gị pụrụ iche na-aga njem site Europe. Na iji ụzọ kpebie ihe a, nwere ike ị chọrọ na-edebe tiketi n'ọdịnihu. Ọtụtụ ihe kwesịrị ịrịba ama bụ na ị ga-enwe ike akwụkwọ ụgbọ okporo njem na-agụnye ahịa ọrụ na asụsụ gị na-ekwe ka maka ime mgbanwe dị ka Save A Train enye ohere.
Europe Nsoro Planner Mkpa atụmatụ ihe
All atụmatụ na-amalite na-eme ka n'aka na ị nwere ndị dị mkpa njem akwụkwọ. N'otu aka ahụ, n'ihu na-eme atụmatụ njem gị, nwere ike ị chọrọ tụlee na-efe efe nke mbụ ebe ọ bụrụ na ị na-ebi n'èzí Europe na ụgbọ okporo ígwè na-ejegharị ejegharị ma ọ bụrụ na ị na-ebi n'ime Europe n'ihi na ọ bụ ụzọ kasị mma njem na Europe. Ụfọdụ n'ime ihe ndị na-iyi mkpa ugbu a njem na-; akụkọ ihe mere eme saịtị, agwa, nightlife, osimiri, nri, na-eme ihe.
Europe Nsoro Planner site obodo
Firstly, abụọ na-mkpa maka n'abalị ụgbọ oloko na mba na ụgbọ oloko na ị pụrụ ime ya na Save A Train. Reservations kwere omume n'ihi intercity elu-ọsọ ụgbọ oloko (na nsonye EuroCity na InterCity). Main intercity routes are Vienna & Linz, Salzburg, Graz & na Carinthia district. Austria Europe Nsoro Planner awade nnọọ mma mba njikọ ụgbọ oloko. Ọzọkwa, na-aba n'anya na snacks dị na kasị ụgbọ oloko na iri nhọrọ dị na mba ụgbọ oloko. Ị nwere ike mee ka anyịnya igwe na Austrian ụgbọ oloko. Ị nwere nakwa tiketi maka Austria na-enye gị ohere iji zụọ njem ka Lichtenstein.
Ọtụtụ ụgbọ oloko na Belgium achọ abụọ, otú bụghị ọtụtụ ọhụrụ anyị Europe Nsoro Planner ebe a. Ọ bụ nnọọ na-atụ aro karịsịa na maka ọdụ ụgbọ oloko, mba ụgbọ oloko, na elu-ọsọ ụgbọ oloko ị ga-enwe abụọ oge zuru ezu tupu. Ọzọkwa, ụgbọ oloko na Belgium nwere 1st na 2nd klas aba. Ụfọdụ n'ime ụgbọ oloko na-enye a Obere mmanya na-ekpo ọkụ na oyi na-atụ snacks. Journey ugboro n'ime Belgium na-ngwa ngwa na nbuli-ije n'etiti, isi obodo na-ewere 20 nkeji otu awa.
N'otu aka ahụ ka Belgium Europe Nsoro Planner, you do not need to make a reservation for most trains in Bosnia. It is not possible to make reservations for anụ ụlọ ụgbọ oloko na Bosnia. Nke a na-agụnye Brzi Voz ngwa ngwa ụgbọ oloko na
njem obodo ụgbọ oloko. N'ụzọ dị iche na ndị ọzọ na mba Europe, anyịnya igwe na-agaghị ekwe na ụgbọ oloko na Bosnia. Ọzọkwa, mba njikọ si Bosnia aga site Sarajevo ojii.
Europe Nsoro Planner maka Bulgaria
You don’t need much of Europe Route Planner in terms of reservations for Barz Vlak local ‘rapid’ ụgbọ oloko na na-Patnicheski obodo ụgbọ oloko. Otú ọ dị, abụọ na-achọrọ maka Expresen Vlak ngwa ngwa ụgbọ oloko na mba na ụgbọ oloko. International ụgbọ oloko dị na Bulgaria agụnye Bulgaria Express, The Black Sea Train, The Bucharest Istanbul Express otú ụfọdụ ndị ọzọ ụgbọ oloko na-ahapụ si Sofia. Bulgaria isi ụzọ gasị iri 6-8 awa (n'otu ntabi anya ụgbọ oloko kwere omume) Sofia bụ, n'ezie, isi ojii maka mba njikọ. Bikes na-ekwe na ụgbọ oloko Otú ọ dị ị ga-mkpa-akwụ ụma maka ha.
Europe Nsoro Planner na Save a Train
N'ihi na e nwere otu nde ndị mere njem site na Europe, anyị hụrụ gị ọnụ ala tiketi. Europe nwere ọtụtụ mara mma n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ebe nwekwara enwe ndị kasị mara mma, na nsonye àkwà mmiri na osimiri. N'ihi ya, mgbe ị na jikwaa na mba ị na na Europe Nsoro Planner, Were 3 nkeji ugbu a ka akwụkwọ ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè na Europe na Zọpụta a Train. Lezienụ iji niile na-ewu ewu ịkwụ ụgwọ ụzọ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-route-planner-trains%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro
#bosnia #bulgaria longtrainjourneys Train Travel travelaustria njegharị